Wiil Soomaali ah oo maseer dartiis Switzerland dil ugu geystay wiil kale oo Soomaali. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Wiil Soomaali ah oo maseer dartiis Switzerland dil ugu geystay wiil kale...
Wiil Soomaali ah oo maseer dartiis Switzerland dil ugu geystay wiil kale oo Soomaali.
Geneva (Caasimada Online) – Muwaadin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Fahad Shire Yasin ayaa lagu dilay magaalada Geneva ee dalka Switzerland sida wariyay wargeyska 20 Minuten ee kasoo baxa dalkaas.
Qoys deegaan ku ah magaalada Geneva ayey la xiriirta qisadaan, waxaana warbixinada la qoray lagu sheegay in ninka dilka geystay oo magaciisa lagu sheegay Mohamed Ahmed uu ka carooday in xiriir lala sameeyay xaas ay kala tageen oo afar caruur ah u dhashay.
Dilka waxaa loo adeegsaday Tooreey, sidoo kalana Mohamed wuxuu dhibaato soo gaarsiiyay xaaskiisii hore iyadoo hadda ay taallo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Geneva.
Shaqsiga dilka geystay, sidoo kalana dhibaatada u geystay xaaskiisii hore waxaa da’diisa lagu sheegay 32-jir, wuxuuna u shaqeynayay shirkad cunnooyinka dadka ugu geysa guryaha.
https://537fee006ac4bd4b6f080335ca0f0664.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html Booliiska ayaa qabtay, waxeyna weydiin doonaan su’aalo la xiriira falka uu geystay iyadoo sharciga dalka Switzerland u yaalla uu yahay inuu wajaho xabsi inta u dhaxeysa shan ilaa sideed sano.
Sidoo kale muwaadinka wax dilay dhawaan ayuu soo galay dalka Switzerland wuxuuna wajahi doonaa musaafuris marka uu dhameysto xabsiga.
Previous articleWararka Maanta oo Talaado ah iyo hadal heynta ka cusub Norwey .
Next articleWariyihii Caanka ahaa ee BBC-da oo ku geeriyooday London.